ThinQ, smart friji nwere 29 "ihuenyo sitere na LG | Ngwa akụkọ
ThinQ, smart friji nwere 29 ″ ihuenyo LG
Miguel Hernandez | | Ihe omume, General
Firmlọ ọrụ Korea nke LG, nke na-adịghị akwụsi ike na ọrịre nke ekwentị, na-aga n'ihu na nnukwu ahịa eletrọniki onye ahia nwere ihe ohuru na nke di nma, nke megoro ya ihe kwesiri ntukwasi obi. Ugbu a, anyị nọ na ụbọchị CES 2018, kedu ka ọ ga - esi bụrụ ụzọ ọzọ, nke a bụ LG chọrọ ịga n'ihu na - agbanwe agbanwe.
Ndị igwe jụrụ oyi agaghị agbanahụ ya, ọ bụkwa na ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ ụdị ngwa a iji mepụta ụbọchị ha ruo ụbọchị ma nwee mmetụta dị ukwuu karị (nke a na-enye maka isi nke Black Enyo).
Anyị na-ewetara gị, ma ọ bụ karịa LG na-egosi ThinQ, friji mara mma Ọ nwere ihuenyo 29-anụ ọhịa nwere ikike imetụ aka. Ihe kachasị mkpa bụ na 29 ″ panel a dịtụ nghọta, yabụ anyị nwere ike ịhụ ihe anyị nwere n'ime naanị site na ịpị aka na ihuenyo ahụ (ọkụ, ka anyị ghara ịme ọgbaghara). Ga-enwe ike iji ihuenyo mmetụ iji jikwaa njikwa atụmatụ nke nri na nchekwa anyị.
N'ihi webOS na Amazon si Alexa anyị ga-enwe ike ịmepụta akwụkwọ mmado, ọkwa banyere ngafe ụbọchị nakwa banyere ọnọdụ nri n'ozuzu. Kedu otu ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, igwefoto panoramic dị n'ime ya bụ nke ga - enyere anyị aka ịlele anya site na ekwentị anyị ma ọ bụrụ na anyị nwere ngwaahịa a na - ekwu, ma ọ bụ. Lee friji si na nnukwu ụlọ ahịa ahụ iji hụ ma anyị nwere Coca-Cola O yiri ka ọ na-adọrọ mmasị, n'ezie. Na mgbakwunye, friji ThinQ ga-ejikọ ya na ndị ọzọ nke smart na ngwaọrụ ụlọ nke LG na-enye. Otú ọ dị, ihe dị mkpa, anyị enweghị ike ịgwa gị, ebe ọ bụ LG ekwuputaghi ụbọchị mwepụta ma ọ bụ ọnụahịa gọọmentị, mana anyị ji n'aka na ọ gaghị adị ọnụ ala.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ihe omume » ThinQ, smart friji nwere 29 ″ ihuenyo LG
Buy ga-azụta ụlọ ọhụrụ ka ịnụ ụtọ TV ọhụrụ Samsung nke 146-inch
HTC Vive Pro, mkpebi ọzọ maka ntinye nke HTC na mebere eziokwu